(Xog) Farmaajo iyo Kheyre oo lacag hal Malyan u xawilay Axmad Garaash & Puntland oo dakaal sokeeye laga abaabulayo - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Xog) Farmaajo iyo Kheyre oo lacag hal Malyan u xawilay Axmad Garaash...
(Xog) Farmaajo iyo Kheyre oo lacag hal Malyan u xawilay Axmad Garaash & Puntland oo dakaal sokeeye laga abaabulayo
Warar lagu kalsoon yahay oo MOL ka heshay ilo kala duwan ayaa xaqiijinaya in asbuucii la soo dhaafay ay Farmaajo , Xasan Khyere iyo Fahad Yasin u xawileen Madaxweyne ku Xigeenka Puntland Mudane Axmad Garaash lacag markeedii hore ahayd $800,000 laakiin $30,000 ka mida aay soo goosteen kooxdii dalaaliinta ka ahaa xaliwilaada lacagtaas.
Lacagtaas ayaa waxaa la soo mariyay ganacsato reer Puntland ah iyada oo lacagta qaar kamida lacagtaas laga soo diray dalka Kenya iyo Somaliland. Waxaana loo soo diray sidii lacag ganacsi loogu maareeynayo oo kale. Dhanka kale maalintii arbadaca asbuucaan ayaa waxaa sidoo kale la soo diray $250,000 taas oo Boosaaso soo martay. Nooma suugaralin soo in aan helno magacyada dadka lagu soo hagaajiyay lacagta , laakiin dhawaan ayaan filaynaa in aad helno qaabka lacagta loo gaarsiyayay Axmad Garaash iyo magacyada dadkii ka shaqeeyay.
Waxaa muuqato in la doonayo in Puntland laga abuuro qalqal siyaasadeed kaas oo la doonayo in uu u xuubsiibto dagaal sokeeye oo la isaga horkeenayo dadka ree Puntland. Qalalaasahaan ayaana la doonaayo in uu ku beegmo xiliga laga hadlayo arimaha doorashada iyo in Puntland lagu aamini karo in ay doorasho qabato.
Previous articleCOVID-19, Severe Locust Outbreaks Compound Economic, Security Woes in Somalia Ahead of Long-Awaited Elections, Experts Tells Security Council
Next articleUrurka Ictisaam oo xalay markale muujiyay in ay gacanta ku hayaan awooda fadwada iyo siyaasada dalka